Lweentlanga ezahlukeneyo Portfolio kunye Unbalancing - Blockchain News
Ukuba umtyali-mali sele ngokuqinileyo isigqibo umnqweno wabo ukutyala cryptocurrencies yaye sele efunde lonke lwaseNtshona Koloni ziba zemali umdla, lixesha lokucinga malunga emayenziwe ngayo iphothifoliyo yotyalo elizayo.
An portfolio yotyalo yingqokelela-asethi crypto eziqokelelweyo ukuphumeza injongo enye ngohlobo yenzuzo. Le nto, maxa wambi ukuziphatha market bumisela iimeko ezinjalo, apho ukugcinwa asethi ezikhoyo sele uloyiso enkulu. ngoko ke, xa ngokuvula portfolio, kuyimfuneko ukunikela ingqalelo kungekuphela nje amandla ka nengqekembe ethile, kodwa ngeendlela abarhola ukuba linikeza market crypto. and, kanjalo, into yokugqibela kukuba ukwenza uzibeke yonke imali yakho ngqekembe omnye ngethemba lokuba oko kuya kukwenza ube ngusozigidi crypto.
Fast and kuyoyikisa vs. Long and Easy
ngokuqhelekileyo, izicwangciso zotyalomali lungahlulwa-hlulwa ibe ngamaqela amabini. investment zexesha elide abakhethwa kubatyali angqingqwa, Abaxhobele ukuncama iingeniso quick (ababadala ethetha, siyamthanda kwimarike crypto ukuba). Okuninzi nxaxheba market yokungcakaza bathembele yorhwebo elifutshane ndlongo, imali oluthembisayo umbane-fast kunye nengozi ephezulu yokulahlekelwa yonke into ngexesha elinye.
Iphothifoliyo investment ukuze kwakheke ngokusekelwe kwezi zicwangciso zibini, lidala lonke uluhlu cryptocurrencies ukuba ibe zexesha elide kunye elifutshane. Kubalulekile ukukhumbula, kunjalo, ukuba ixesha elide, zemali ethembekileyo awukwazi zithengwe kwaye walindela ngenxa ixabiso abo ukuba iirekhodi, ke kuba lutyalo-mali lwexeshana, nangeyiphi ndlela, kuya kuba yimfuneko ukuba singene ezisisiseko yonaniselwano, ufunde imithetho kunye nezithethe zemalike, isiseko esisiso analysis technical, kwaye ubusuku esweni yangasemva iindaba imarike crypto.
Musa kwakhona singalahlekani nento yokuba nkqu ingqekembe ebonakala ethembekileyo nga baziphathe ngendlela engeyiyo yasuka ukuntywila ezinzulwini amaxabiso. Abantu owabathengayo Bitcoin for $19,000 ngenkankulu ngoku bakugqala mali ethembekileyo. Imarike imakethi, kunye investment zexesha elide ifuna umonde Spartan kunye nenkqubo luvo ufakelo lwesamente. Ukuba ulahlekelwe engqondweni kwaye hayi ukuba athengise zonke ii-asethi ezikhoyo ngexabiso ubuncinane ngumsebenzi ophambili we-mali eye wangena kwindawo ethubeni elide.
Phakathi Okuvela and Bulls
Enye yeendlela ezininzi ezimbini ezahlukeneyo imingcipheko ukuba athathe isikhundla phakathi iinkunzi neebhere, hlanganyela asethi ngendlela yokuba unento yokwenza zombini yasenza kunye iintsingiselo bearish. Kukho umngcipheko omkhulu kuxhuzula kwezi phakathi omnye kunye nezinye kuba kufuneka uzakugqiba noba ufuna ukuzibandakanya smart okanye handsome. Ukwengeza, bambalwa abantu ukulawula ukutshintsha ingqondo zabo phakathi ezilindelekileyo ngokuvela kunye kukuwa asethi crypto. Njengomgaqo, akuba ndibathandile-asethi, Ndifuna ukuba zonke iingxaki zezexeshana, i igrafu zifihla into, kwaye ingqekembe uza ndiziqhawule amakhandlela phezulu.
Le kungalingani ziya kuba zilungele kubatyali ebandayo-ezinegazi abalahlekelwe elide ukholo imimangaliso, ukuqonda ngokucacileyo imiyalezo zemalike, kwaye bakwazi ukuqikelela ukuziphatha bobabini yenkomo kunye mafu- nebhere.
Akukho Ihlazo in ngesenzo sokunyiba
Uza kukwazi ukuba aphephe iimpazamo ezininzi ukuba phambi kokuba utyale imali ufunda amava abo bezisoloko kwimarike. Ngethamsanqa, kukho ezininzi i izixhobo zemfundo evulelekileyo, apho abatyali zimali ushicilela ulwazi malunga kwiiphothifoliyo zabo crypto yonke imihla. Khangela ukuba blog okanye yocingo channel, okufumanayo ezinomdla kakhulu. Nikelani ingqalelo uzinzo portfolio, iinqobo apho eziinkozo ezidityaniswe kuyo, nokuziphatha kwe-mali kwimeko yokudodobala imarike. Ukusukela ipotifoliyo yakho umzekeliso lowo iphothifoliyo yaye, ukuba kuyafuneka, ukulandela iingcebiso yomtyali-mali malunga nokuthengwa kwempahla ezintsha.
Le ukhetho yesibini engabandakanyi ngokulayita ezinobuchopho nje zokulandela izincomo wabathengi. Ukuya kumhla, kukho amashumi eziliqela bot crypto, kwakulo kwimo imihla anike imiqondiso ukuba athenge okanye athengise i mpahla crypto, ezibonisa umlinganiselo portfolio iyonke, elandelayo eya ukunciphisa imingcipheko. Omnye umbuzo kukuba ayaziwa ukuba iziqinisekiso oko abarhwebi emva izicelo eneneni ziye, akukho namnye uya kukukhusela ukuba nenxaxheba iimpompo ubunzima kunye zokulahla, kwaye apho kungekho, uyakwazi ityala isicelo kuphela kwifowuni yakho.
Ukubuyela kule amathuba imivuzo, apho market crypto inikeza, enye iinketho ezininzi ezifanelekileyo unbalancing iphothifoliyo na ukuhanjiswa kwempahla nezixhobo zotyalo. umsebenzi ngendlela eyiyo imali yotyalo Le.
Olu hlobo portfolio kukhangeleka ngolu hlobo ukuba:
25% iingqekembe elikhokelayo utyalo-mali lwexesha elide (BTC, ETH, XRP);
25% urhwebo medium-term in altcoins eziphezulu;
10% imvumo robotized;
10% robots urhwebo urhwebo algorithmic;
10% ukuthengisela ezindabeni (yokulandela Gainers kunye iyivume);
10% utyalo ku ICOs ezithembisayo;
10% asethi high-risk crypto.
Ipesenti lwezabelo kwiphothifoliyo enjalo kuya kuxhomekeka kwindlela wayezazi kakuhle nina icebo ethile investment kunye nendlela efanelekileyo ngayo imeko yanamhlanje kwimarike crypto.
A portfolio crypto nga kuyilwa kwaye zisekelwe kwimimandla investment njenge ajenda yokutshintsha imihla ngokwemiqathango yommiselo ngokwasemthethweni cryptocurrency kweli hlabathi nefuthe kakhulu amazinga. Onokumthemba inxalenye yepotifoliyo kumphathi fund, kunjalo, kule meko, kuya kufuneka ukuba uhlawule ipesenti yenzuzo ezifunyenweyo.
Nangeyiphi ndlela, kanye kwakheka, iiphothifoliyo ye crypto akayi kuba bonke ubomi bakho,. Kuya kufuneka ukuba ziqwalaselwe kunye “izanyazanyiswa” nolu tshintsho market, kunye ukubonakala zemali ezintsha ethembisayo nozinzileyo, yaye, ekugcineni, kunye kokoma imarike, xa nkqu asethi basenyongweni crypto kunokubangela umnqweno uye kuzithengisa zonke izinto kwaye lityhale imali eyake phezulu lelonani.
Slovenia kudala Bitcoin isikhumbuzo
Kuhanj, a c Slovenian ...
Imbewu enobukhosi ...
Post Previous:ERashiya Gazprombank ukuvavanya inkonzo cryptocurrency
Post Next:kuthiwa Regulator Imiyalelo South Korea kaThixo 12 ukutshintshiselana cryptocurrency ukuhlaziya izivumelwano zabathengi
UTshazimpuzi 17, 2018 e 5:00 PM
Abatyali badibana umzuzwana ukuxoxa exemption crypto
Bitcoin uthenge oda ngaphezu 90% yemarike okokuqala ukususela ngoMatshi 2017